जापानमा मार्च! दुबै जाडो र वसन्तको आनन्द लिनुहोस्! - Best of Japan
हुइस टेन बॉश, नागासाकी जापान = शटरस्टकमा डच वायुमिलहरूको साथ ट्यूलिप्स रंगीन
मार्चमा जापानको तापक्रम बिस्तारै ताप्दछ। बिस्तारै तपाईले धेरै न्यानो दिनहरू देख्नुहुनेछ, जुन भावनाले वसन्त आएको छ। यद्यपि तापक्रम प्राय: फेरि घट्छ। वसन्त नआउन्जेल दोहोरिने चक्रमा फेरि चिसो पाउन यो तातो हुन्छ। यदि तपाईं मार्च महिनामा जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं चिसो जापान र केही तातो जापान दुबै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। चिसो क्षेत्रहरू जस्तै होक्काइडोमा, तपाईं अझै पनि जाडोको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं सुन्दर फूल बगैचा र अधिक हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं दक्षिणी क्षेत्र जस्तै कुशु। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई केही सिफारिश गरिएका ठाउँहरू र गतिविधिहरू परिचय दिनेछु यदि तपाईं मार्चमा जापान भ्रमण गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ।
मार्चमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो को जानकारी
तपाईं अझै जापानमा जाडो खेल गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं सुन्दर फूल बगैंचा हेर्न सक्नुहुन्छ
यो मार्चमा राम्रो वर्षा हुन्छ त्यसैले आफ्नो छाता तयार गर्नुहोस्
यदि तपाईं मार्चमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरमा छवि क्लिक गर्नुहोस् अधिक जानकारीका लागि।
मार्चमा पनि, होक्काइडो र होन्शुका हिमालहरू अझै पनि जाडोको अवस्थामा छन्। यस कारणले गर्दा मार्चमा स्की रिसोर्टहरू अझै खुला छन्। तपाईं स्कीइ,, स्नोबोर्डि,, स्लेडिding र अन्यमा मजा लिन सक्नुहुनेछ।
यद्यपि Niigata Prefecture जस्ता केही क्षेत्रहरुमा तापक्रम बिस्तारै बढ्नेछ। दिनको समयमा तपाईं हिउँ भन्दा पानी पर्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ त्यसैले स्कीइ conditions्ग अवस्था बिस्तारै खराब हुँदै जान्छ। यदि तपाईं जापानमा मार्चको अवधिमा प्रामाणिक शीतकालीन खेलहरू अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने, होक्काइडोमा स्की रिसोर्ट छनौट गर्नु राम्रो हुन्छ।
शिराकावागो मार्चको अन्तमा (Gifu प्रान्त)। हिउँ जो निजी घरको छतमा थुप्रिएको थियो त्यो पहिल्यै पग्लियो = शटरस्टक
यदि तपाईं मुख्य होन्शुको हिमाली पहाडी क्षेत्रहरू जस्तै शिराकावागो जर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं भर्खरको मार्चको शुरुमा जापानमा आउन चाहानुहुन्छ। यी क्षेत्रहरूमा हिउँ बिस्तारै मार्चमा पग्लिन थाल्छ। हिउँ पहाडको चुचुरोमा लगभग मे सम्म रहनेछ, तर गाउँहरूमा जहाँ मानिसहरू बसोबास गर्छन्, यो मार्चको शुरुबाट हिउँको सट्टामा पानी पर्न थाल्छ।
यदि तपाईं जापानमा पहाड चढ्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तपाईंको खोजी अगाडि राम्रो गर्नुहोस्। हिउँ बिस्तारै हिउँ पर्ने पहाडहरूमा पनि मार्चमा पग्लिन थाल्छ। नतिजा स्वरूप, ठूलो हिमस्खलन प्रायः हुन्छ। किनभने यो धेरै खतरनाक छ, कृपया सावधान हुनुहोस्।
बलात्कारका फूलहरू चिबा प्रान्तमा "Isuimi रेलमार्ग" सँग राम्रोसँग खिलछन्
मार्चमा, ओकिनावा र क्युशुबाट विभिन्न वसन्त फूलहरू फूल्न थाल्छन्। यदि तपाईं मार्चमा प्रभावशाली फूल बगैचा हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म क्युशुमा हुइस टेन बॉश थिम पार्कको ट्यूलिप फिल्ड सिफारिस गर्दछु। यो थिम पार्कले जापानमा नेदरल्याण्ड्सको दृश्यहरू पुन: उत्पादन गर्दछ। नेदरल्याण्डको कुरा गर्दा, पार्कमा ट्युलिप्स जस्ता डच फूलहरू छन्। ह्युस्टन बाश भरि ट्यूलिप्स फ्लोरको दृश्य धेरै सुन्दर छ।
ट्यूलिप उत्सव प्रत्येक वर्ष मध्य फेब्रुअरी देखि मध्य अप्रिलमा ह्विस्टन बॉशमा आयोजना हुन्छ। यो मार्च मा सबै भन्दा राम्रो लेट छ। यदि तपाई मार्चको दोस्रो आधामा जापान यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने किन हुइस्टेन बोसलाई तपाईको यात्रा कार्यक्रममा जोड्ने छैन?
यदि तपाईं मार्चमा टोकियो नजिकै सुन्दर फूल बगैचा हेर्न चाहनुहुन्छ भने, म शिजुओका प्रान्त वा चिबा प्रान्तको इजु प्रायद्वीप सिफारिस गर्दछु। इजु प्रायद्वीपको शुजेन्जीमा, तपाई सुन्दर फूलहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै बदाम र रोडोडन्ड्रन।
हालसालै, चिबा प्रान्तमा "इसुमी रेलवे" लोकप्रियतामा वृद्धि भइरहेको छ। ईसुमी रेलवे चिबा प्रान्तको उत्तरमा चलेको सानो रेलमार्ग हो। मध्य मार्चको वरिपरि, बलात्कारको धेरै ब्लोहरू रेलमार्ग ट्र्याकहरूमा खस्कनेछ। यदि तपाईं टोकियोमा बस्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया टोकियो स्टेशनबाट जेआर लिमिटेड एक्सप्रेस "वाकाशियो" ओहारा स्टेशनमा जानुहोस्। त्यहाँबाट तपाईं इसुमी रेलवेमा एक सानो ट्रेन सवारी गर्न सक्नुहुन्छ र कार भित्रबाट बलात्कारी फूलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाई वास्तवमै चेरी फूल देख्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले मार्चको पछि राम्रो यात्रा गर्नुहुन्छ। चेरी फूलहरू ओकिनावा र क्युशुबाट हरेक बर्ष यस पटक बिस्तारै फल्न थाल्छन्। मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिलको सुरुसम्म तपाईं टोकियो, ओसाका, क्योटो आदिमा चेरी फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
जापानमा प्राय: देशभरि नै वर्षा पर्छ। त्यहाँ धेरै बतास दिनहरू पनि छन्। जापानी द्वीपसमूह जाडो शैलीबाट वसन्तमा फेला परेको प्रकारमा परिवर्तन हुन्छ। यस संक्रमण अवधिको कारण, मौसम मार्चमा स्थिर छैन। त्यसोभए जब तपाईं जापान आउनुहुन्छ, कृपया आफ्नो छाता नबिर्सनुहोस्।
सामान्यतया, मौसम जापानको शुरुवाती वसन्तमा अस्थिर हुन्छ। मौसम अस्थिर हुँदा चेरी फूलहरू पनि फूल्छन्। यस कारणले, जापानी मानिसहरु सोच्छन् कि यदि तातो दिनहरु जारी रह्यो, "चेरी फूलहरू चाँडै नै फूल्न सक्छन्"। यस बीच, यदि चिसो दिन जारी रह्यो भने, "चेरी फूलहरू केहि समयको लागि फूल्न सक्दैन" दिमागमा आउँदछ।
यस तरीकाले हामी चेरी ब्लास्म्सको लागि कुख्यात अवस्थाको लागि पर्खिरहेका छौं। जब चेरी
फूलहरू फूल्छन्, त्यो अस्थिरता हराउँछ र सबै रमाउँछन्। यदि तपाईं मार्चको अन्त्यमा तपाईंको यात्रा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया तपाईंको घर फिर्ता स्थगित गर्नुहोस् र जापानमा चेरी फूलहरू हेर्नुहोस्।